Fanerena ny filohan’ny Antenimierandoholona hiala : hanao amboletra handresena amin’ny fifidianana ny filoha | NewsMada
Fanerena ny filohan’ny Antenimierandoholona hiala : hanao amboletra handresena amin’ny fifidianana ny filoha
Efa nampoizina. Mazava be: natao izay nametrahana ny filoha nasionalin’ny HVM, Rakotovao Rivo, ho filohan’ny Antenimierandoholona. Izay no nanendrena azy ho loholona, nanerena ny filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha, Rakotomanana Honoré, hitsahatra amin’ny asany. Nambarany teny Anosy, afakomaly, fa fitandroana fihavanana no hoe antony, na teo aza ny tosika politika: tsy naongana izy, tsy nametra-pialana.
Fombafomba sy dingana arahina fotsiny ny raharaha, fa hanao izay fomba rehetra handresena amin’ny fifidianana ny filohan’ny Repoblika. Mazava be: ho kandidà izy, ary hametra-pialana roa volana mialoha ny fifidianana, araka ny And. 46 amin’ny lalàmpanorenana, izay nahabe adihevitra aloha.
Vita koa ny amin’ny hoe sarotra ny hanatanteraka fifidianana, 30 andro faharakeliny ary 60 andro farafahabeny, araka ny And. 47 amin’ny lalàmpanorenana? Efa natsidika fa tsy nilaza hoe tsy maintsy hanao fitsapan-kevi-bahoaka ny filoha. Mihoalahoala rehefa hita fa mitsipaka izany ny rehetra.
Tsy misy izay fijerena fiainam-bahoaka sy fampandrosoana
Mazava be ihany koa fa tsy manao ho zava-dehibe sy tsy mitady izay fitoniana ny mpitondra, afa-tsy izay mahametimety azy eo amin’ny toerany sy handresena amin’ny fifidianana. Resaka tian-kateza ihany ny hoe fampandrosoana, fitsinjovana filaminana ho an’ny fiainam-bahoaka…
Lojika politika ny an’ny HVM, na eo aza ny tsy fahombiazana nandritra izay fe-potoam-piasana madiva hifarana izay? Fanahiana fanonganam-panjakana na tsy ho tafaverina eo amin’ny fitondrana intsony aza no anton’izao karazana paipaika sy kajikajay politika rehetra izao. Ho tonga hatraiza?
Mbola lojika politika koa ny fikendrena fandresena amin’ny fifidianana, na efa aloam-bahoaka izao aza? Eo ny raharaha: mahabe fanahiana, mila fahamailoana… Niaraha-nahita ny nafitsoky ny fitondrana tamin’ny fifidianana kaominaly, 30 jolay 2015. Toy izany koa ny fifidianana loholona, 30 desambra 2015.
Ahina hiverina indray ny hosoka sy hala-bato
Ho amboletra indray ny fifidianana? Nisy, ohatra, ny fandrahonana sy fividianana mpifidy tamin’ny fifidianana 2015. Teo koa ny hosoka sy hala-bato maharikoriko isan-karazany. Nefa vitavita sy tsy hitahita ho azy, na teo aza ny fitoriana sy fitarainana. Mbola hiverina izany traikefa maloto izany?
Ihazakazahana ny fifidianana, ary fihetsiketsehana handresena amin’izany fotsiny izay atao etsy sy eroa fa tsy inona? Na fampihavanam-pirenena io, na fanatsarana lalàm-pifidianana…